Minisitry ny raharaham-bahiny any Ekoatera: nahazo zom-pirenena Ekoatoriana i Assange
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Minisitry ny raharaham-bahiny any Ekoatera: nahazo zom-pirenena Ekoatoriana i Assange
Nilaza ny minisiteran'ny raharaham-bahiny ekoatoriana (MFA) fa nanome naturalisation an'i Julian Assange izy ireo. Ny fanehoan-kevitry ny MFA dia tonga iray andro taorian'ny nanambaran'i Quito kara-panondro tamin'i Assange.
Afaka nahazo ny dingana voalohany nahazoany tsimatimanota ara-diplomatika ny pasipaoro, satria te-hamaha ny fijanonan'ny masoivoho tsy voafetra ao Assange i Ekoatera. Ny mpanorina WikiLeaks dia nohajaina tao amin'ny masoivohon'i Ekoatoriana nandritra ny dimy taona.
Ny birao raharaham-bahiny UK dia voalaza fa nandà ny fangatahana nataon'i Quito hanome ny toeran'ny diplaomatika mpitsoka. Voalaza fa nomena azy ny pasipaoro tamin'ny 12 Desambra.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny any Ekoatora Guillaume Long, dia nilaza fa mitady vahaolana “mendri-kaja” amin'ny governemanta UK noho ny raharaha Assange ny firenena. Nanampy izy fa tsy hiala ao amin'ny masoivohon'i Ekoatera i Assange raha tsy misy antoka azo antoka.
Matetika i Ekoatera dia mamoaka kara-panondro toy izany ho an'ireo milaza ho manana toerana onenana, izay antsoina hoe cedulas. Ny fivorian'ny Vienna momba ny fifandraisana ara-diplaomatika dia milaza fa misy olona manana pasipaoro diplomatika tsy afa-bela amin'ny fanenjehana. Tsy mbola misy antoka anefa izany.
Assange dia nipetraka tao amin'ny masoivohon'i Ekoatoriana tao London nanomboka ny taona 2012, rehefa voampanga ho nanao herisetra ara-nofo tany Suède izy. Na dia efa nametraka ny fiampangana azy aza ny mpampanoa lalàna Suède, dia mijanona eo ivelan'ny ambasady ny polisy britanika vonona hisambotra ny mpiara-manorina wikiLeaks noho ny famakiana ny fonjam-pianarany 2012 Nandà ny hitolo-batana amin'ny manampahefana britanika i Assange, noho ny tahotra sao entin'izy ireo any Etazonia izy izay heveriny fa henjehina noho ny asa fanakorontanana nataony.